Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Airbus na-ekwupụta ụdị izizi gburugburu ebe obibi ya
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • investments • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Wing of Echi, nke ụlọ ọrụ teknụzụ Aerospace nke UK kwadoro, bụ mmemme Airbus zuru oke nke metụtara ndị mmekọ ụwa na ndị otu n'ofe saịtị Europe nke Airbus, gụnyere Bremen na Germany, ebe otu 'Wing Moveables' hiwere. Ndị na -eme ngosi nku atọ ga -achịkọta ihe karịrị teknụzụ ọhụrụ 100 iji nyochaa usoro nrụpụta na usoro mgbakọ ọhụrụ na ebumnuche ime ka ụgbọ elu na -adigide.
'Wing of Tomorrow' na-erute ihe dị mkpa dị mkpa na mgbakọ nke ihe ngosi nku ya nke mbụ zuru oke.
Mmemme ọhụrụ nke Airbus ga -akwalite nghọta maka nrụpụta nku na nrụpụta ọrụ.
A ga-emepụta nku ihe nlele atọ zuru oke n'okpuru mmemme 'Wing of Tomorrow'.
'Wing of Tomorrow', bụ nnukwu mmemme nyocha na teknụzụ nke Airbus, erutela ihe dị mkpa site na mgbakọ nke ụdị nku nku mbụ zuru oke.
Mmemme nkuchi echi ga -anwale naanị ihe ndị mejupụtara ọhụrụ na teknụzụ ọhụrụ na ikuku na nku ụlọ mana, nke kachasị mkpa, nyochaa ka enwere ike isi meziwanye nku na mmepụta ụlọ ọrụ iji gboo mkpa ọdịnihu ka ngalaba ahụ na -apụta site na ọrịa na -efe efe.
A ga-arụpụta nku ihe ngosi atọ zuru oke: a ga-eji otu ịghọta njikọta sistemụ; a ga-anwale usoro nke abụọ ka e jiri ya tụnyere ịme ngosi kọmputa, ebe a ga-agbakọta otu ụzọ atọ iji nwalee mmepụta ihe na-abawanye ma tulee ya na ịmebe ụlọ ọrụ.
Sabine Klauke, Airbus Onye isi ọrụ nka, kwuru, sị: “nku nke echi, akụkụ dị mkpa nke Pọtụfoliyo R&T nke Airbus, ga -enyere anyị aka inyocha ohere nrụpụta nke mmepụta nku nku n'ọdịnihu. Teknụzụ nku nku na-arụ ọrụ nke ọma bụ otu n'ime ọtụtụ azịza-yana mmanụ ụgbọ elu na-adigide na hydrogen-anyị nwere ike mejupụta itinye aka na ebumnuche mbibi ikuku. Wing nke Echi bụkwa ihe atụ nke etu njikọta ụlọ ọrụ buru ibu ga-esi dị mkpa iji nweta atụmatụ mpaghara anyị maka ọdịnihu ga-adigide. ”
Wing of Echi, nke ụlọ ọrụ teknụzụ Aerospace UK nke UK kwadoro, bụ mmemme Airbus zuru oke nke metụtara ndị mmekọ ụwa na ndị otu n'ofe saịtị Europe nke Airbus, gụnyere Bremen na Germany, ebe otu 'Wing Moveables' nọ. Ndị na -eme ngosi nku atọ ga -achịkọta ihe karịrị teknụzụ ọhụrụ 100 iji nyochaa usoro nrụpụta na usoro mgbakọ ọhụrụ na ebumnuche ime ka ụgbọ elu na -adigide.
Mgbakọ nke mkpuchi nku dị mgbagwoju anya weere na saịtị Airbus 'Filton, England, ebe emepụtara ya na National Composite Center na Bristol. A na-ebunye mkpuchi nku na akụkụ dị mkpa sitere na GKN Aerospace-Edge Trailing Edge-na ụlọ ọrụ nyocha ihe nrụpụta dị elu, Wales, ụlọ ọrụ na-emepụta nku nku nke Airbus na Broughton, Flintshire, maka mgbakọ amalite.